Andenzi uqikelelo oluninzi xa kufikwa kwikamva lobuchwephesha, kodwa xa ndibona ubuchwephesha buqhubela phambili ndihlala ndibona ukubakho okuhle kubathengisi. Ukuvela kobukrelekrele bokuzenzela obudityaniswe nezixhobo ezingenamda ze-bandwidth, amandla okuqhubekeka, inkumbulo kunye nendawo ziya kubeka iingxoxo zangaphambili kwindawo yabathengisi.
I-chat bots ziinkqubo zekhompyuter ezilinganisa incoko nabantu abasebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela. Banokuguqula indlela onxibelelana ngayo ne-intanethi ukusuka kuthotho lwemisebenzi yokuziqalela ngokwakho ukuya kwincoko ye-quasi. UJulia Carrie Wong, uMgcini
Iincoko azikho zintsha, bezikhe zajikeleza okoko bekukho ingxoxo. Yintoni etshintshileyo kukuba nako kwabo ukubamba incoko nomntu. Ngapha koko, itekhnoloji ihambele phambili kangangokuba kukho ithuba lokuba sele unencoko kunye nengxoxo kwaye ungayiqondi.
Kutheni abathengisi beza kusebenzisa iiChatbots
Zimbini iindlela zokunxibelelana ngewebhu. Ukudibana nje kushiya umtyeleli ukuba aqalise unxibelelwano nophawu lwakho. Ukusebenzisana okukuko kuqala unxibelelwano notyelelo. Xa uphawu luqala ukunxibelelana nendwendwe; umzekelo, ukubuza undwendwe ukuba bafuna uncedo, uninzi lwendwendwe luya kuphendula. Ukuba uyakwazi ukubandakanya kwaye uncede olo ndwendwe, unokufezekisa iinjongo ezininzi:
Ukuzibandakanya kwabaTyeleli -Ngaba inkampani yakho inayo izixhobo zokucela zonke iindwendwe ukuba ungabanceda njani? Andazi ngenkampani eyenzayo… kodwa incoko yengxoxo inokulinganisa kwaye iphendule kubakhenkethi abaninzi njengoko kufuneka, xa kufuneka njalo.
Ingxelo ngeSiza Ukuqokelela idatha ebalulekileyo malunga nephepha lakho kwindwendwe lakho kunokukunceda ukuphucula indawo yakho. Ukuba wonke umntu ufika kwiphepha lemveliso kodwa edidekile ngamaxabiso, iqela lakho lentengiso linokuphucula iphepha elinolwazi lwamaxabiso ukuphucula uguquko.
Isiqinisekiso sokuKhokela -Isixa esikhulu seendwendwe sisenokungakulungeli ukusebenza nawe. Basenokungabi nalo uhlahlo-lwabiwo mali. Basenokungabi nawo umgca wexesha. Basenokungabinazo ezinye izixhobo eziyimfuneko. Ingxoxo inokunceda ekuboneni ukuba zeziphi izikhokelo ezifanelekileyo kwaye uziqhubele kwiqela lakho lokuthengisa okanye kuguquko.
Ukukhokelwa kweNkokeli -Ukuqokelela ulwazi malunga nethemba lakho kunokukunceda wenze ubuqu bakho kunye nokuzibandakanya nabo kulo lonke uhambo lwabathengi okanye xa bebuyela kule ndawo.
Isikhokelo -Undwendwe lufike kwiphepha kodwa alufumani sibonelelo basifunayo. Ingxoxo yakho iyababuza, ithemba liyaphendula, kwaye incoko ibabonisa iphepha lemveliso, iphepha elimhlophe, iposti yebhlog, ifoto okanye nevidiyo enokubanceda ukuba babatyhalele kuhambo lwabo.
Ingxoxo -Abarhwebi sele beyazi indlela yokuthetha kwakhona kunye nokwenza umsebenzi kwakhona emva kokuba undwendwe lushiye indawo yakho. Ungathini xa unokuxoxisana ngaphambi kokuba bahambe? Mhlawumbi amaxabiso athe xhaxhe ukuze ubonelele ngesicwangciso sentlawulo.
Khawufane ucinge xa ​​uneqela elingenamda lababulisi lokuzibandakanya neendwendwe zakho kwaye ubancede ubakhokelele ekuthengeni… ayizukuzaliseka loo nto? Ewe, yile nto ubukrelekrele bokuzenzela kunye neencoko ziya kuba zeqela lakho lokuthengisa.
I-infographic evela Futurism.
tags: aikukubhadla okungeyonyaniBotbotsincoko botingxoxoIngxoxo ye-chatbotuhambo lwabathengikhokeloimbali yeencokokhokelaisiqinisekiso esikhokelayoIngxelo yesizaUkuzibandakanya kweendwendweYintoni iyintoni incoko
Aug 23, 2016 ngo-2:51 PM
Ngenene kweli nqaku kunye ne-infographic, kodwa ndiyathemba ukuba asicingi ngee-chatbots njengenyathelo elicacileyo lokuzivelela kuzo zonke ii-bots!
Besisoloko sizibuza malunga ne-bots kunye nokuba kufuneka ibe luncedo njani iminyaka eyi-6+. Uluvo lwethu? Ngokwenyani iibhothi eziguqukayo ziya kuba ngcono kakhulu kunezi ncoko zebhothi- kwaye siyakuyeka ukubhekisa kwezi ntlobo zencoko njengebhothi kwaphela.
Isifaniso - ezi bots zifana neWeb 1.0. Bayawenza umsebenzi, kodwa ayivakali ngokwentlalo-ivakala ngathi xa iinkqubo zelizwi ezizenzekelayo zithatha indawo yenkxaso yabathengi bobomi bokwenyani.
Kunye nabasebenzisi besoftware yethu, UBot Studio, evumela nabani na ukuba akhe i-bots, besisoloko sizibuza zithini iibhotshi iluncedo ngokwenene, ixesha elide.
Sidibanisa indawo yolwazi enolwazi oluninzi lwebhot-building, kubandakanywa uqikelelo olungekho kancinci eludongeni. Yijonge ku http://www.botsoftware.org. Imalunga ne-bots ngokubanzi, hayi nje ii-bots zokuncokola, kodwa kufanele ukuba luncedo kuye nabani na ofuna ukufunda ngakumbi!
Enkosi ngenqaku lakho!